Ogaden News Agency (ONA) – Caleema-Saarkii Axmad-Madoobe oo si layaableh uqabsoomay. - Idman News
Ogaden News Agency (ONA) – Caleema-Saarkii Axmad-Madoobe oo si layaableh uqabsoomay.
Xaflad lagu caleema saarayay Madaxweynaha dib loo doortay ee Jubba-Land Axmad Mucammad Islaam(Madoobe) ayaa maanta kaqabsoontay Magaala Xeebeedka Kismaayo ee Xarunta u ah Maamulka Jubba-land.
Xafladan oo loo soo agaasimay si Xamaasadi weheliso dadbadanina ku Tilmaameen Jimma-buurad Siyaasadeed waxaa kasoo qayb galay soomaali tira badan oo heeratka kala duwan ee bulshada katirsan Jilibculustuna aad ugu badnayd.
Xubnaha Miisaanka leh ee ka qayb galay xaflada waxaa kamid ahaa: Madaxweynayaashii hore ee Jamhuuriyada Soomaaliyeed Sherkh Shariif Sheekh Axmad & Xasan Sherkh Maxamuud, Madaxweynaha Xilka haya ee Punt-Land Siciid Cabdullahi Dani, Gudoomiye kuxigeenka Koobaad ee Aqalka Senetka Soomaaliya Mudane Abshir Bukhaari, Madaxwynayaashii hore ee Koonfur-Galbeed Soomaaliya & Galmudug Shariif Xasan Sheekh Aadan & C/kariim Xuseen Guuleed, xildhibaano katirsan labada Gole, Odayaasha Dhaqanka iyo Dad kale oo Magac leh.
Dhanka kale waxaa xusid mudan in Kenia soo dirtay Wafdi uu hogaaminayo Madaxa aqlabiyada Baarlamaanka Kenia Aadan Bare Ducaale oo duulimaad Toos ah Nairobi – Kismaayo kusocdaalayay.
Masuuliyiintii Madasha Caleemasaarka kahadashay waxay inta badan iska raacsanaayeen Kubaaqida Nabada, Midnimada & Baahida loo qabo Samaynta Jawi siyaasadeed dagan oo Soomaalidu udhantahay, Dhaliisha Xukuumada Soomaliyeed ee hada jirta iyagoo dhamaantood ugu baaqay inay Xukuumadu latimaado Jawi laguwada hadli karo la isuguna Tanaasuli karo.
Dhanka kale Madaxweynaha lacalermasaarayay oo Khudbad dheer soo jeediyay wuxuu kudheeraaday talo usoo jeedinta Xukuumada Soomaaliyeed oo uu sheegay inay iyadu tahay waalidkii Dalka oo ay tahay inay isu keento bulshada soomaaliyeed sababna ayna unoqonin Caaqnimada Maamulada hoose ee Dalak soomaaliya kajiraayi.
Dhanka kale Xukuumada soomaaliyeed oo horay usheegtay inuu waxba kama jiraan yahay dib udoorashada Axmad-Madoobe ayaan wax war ah kasoo saarin caleemasaarkii Cajabta lahaa ee Maanta.
Somali News - Wararka Soomaaliya, Wararka Somali State
Al-Shabaab oo gubay Gaari siday qaad dilayna dadkii saarnaa
Booliska Kenya oo Sheegay in ay dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab. – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Previous Previous post: Waxa Qoray Xildhibaan Suleymaan Faarax, oo kamid ah golaha wakiillada Puntland. Kenya dalka Soomaliya waa ku xad Gudubtay
Next Next post: Waqtiga uu dhacayo kulan kooda koowaad guddiga joogtada ah ee golaha shacabka oo la shaaciyay – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Somali News – Wararka Soomaaliya (8,679)